အပေါ် Posted 12 / 17 / 2017 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ခံတွင်း turinabol. ဒါဟာရှိပါတယ် 1 မှတ်ချက်.
3.What ခံတွင်း turinabol အမှုန့်ဖြစ်သနည်း 4.What ခံတွင်း turinabol မှုန့်ကနေဘုံလား
7.What ခံတွင်း turinabol ၏အားသာချက်များလား ကာယဗလအတွက် 8.Oral turinabol နှင့်ထိုးဆေး turinabol
ခံတွင်း Turinabol ပထမဦးဆုံး 1962 အတွက်အရှေ့ဂျာမနီထဲက Jenapharm နေဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးလူတို့တွင်ပေမယ့်အမျိုးသမီးများနှင့်တစ်ဦးကုထုံး setting ကိုပင်ကလေးများအတွက်သာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအလွန်မြင့်မားဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုခံစားမယ်။ ဒါကဟို Steroid တစ်မျိုး (AS) ပြင်းထန်ပြဿနာများမရှိဘဲပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့်အရိုးထုထည်ကိုတည်ဆောက်သို့မဟုတ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အားထုတ်မှုအတွက်အလွန်ထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ အရှေ့ဂျာမန် Steroid တစ်မျိုးအရှုပ်တော်ပုံအများပြည်သူအသိပညာဖွစျလာတဲ့အခါသို့သော်ခံတွင်း Turinabol အဆိုပါ 1990 ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိလိမ့်မယ်။
စတင်ခြင်းအချိန်: 20 မိနစ်
ခံတွင်း turinabol မှုန့်ကနေဘုံကဘာလဲ?
သောကြောင့်ဟိုသက်ရောက်မှုရန်၎င်း၏အန်ဒရိုဂျင်၏ခံတွင်း turinabol ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်၎င်း၏မိဘဟော်မုန်း Dianabol ထက်အားနည်းဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Tbol အတူအာမခံချက်မဆိုသိသာကြွက်သားအဆောက်အဦစွမ်းရည်နှင့်အတူကြောင့်အန်ဒရိုဂျင်ဆိုးကျိုးများနှင့် (ကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့ aromatize ရန်၎င်း၏နိုင်ခြင်းမှ) လုံးဝမပါအီစထိုဂျင်သက်ရောက်မှု၏လမ်းအများကြီးလျော့နည်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ သောကြောင့် Dianabol ထက်၎င်း၏မျှမျှတတအားနည်းအစွမ်းသတ္တိ၏, Tbol ထံမှသက်ရောက်မှုထုတ်ယူနိုင်ရန်လိုအပ်သောဆေးများ (ဒီဒီပရိုဖိုင်း၏ Tbol ဆေးများအပိုင်းအတွက်မကြာမီကရှင်းပြသည်ပါလိမ့်မည်) အတော်လေးမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။
ကာယဗလအတွက်ခံတွင်း turinabol နှင့်ထိုးဆေး turinabol
ဂျာမန်အရှေ့အမျိုးသမီးအားကစားသမားတစ်ဦးအချိန်ကနှစ်ခုမှခြောက်ပတ်တစ်နေ့လျှင် MG 5-15 မှာအချိန်ပိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဘေးဖယ်သိသာ virilization ကနေအဲဒီအမျိုးသမီးအားကစားသမားအများအပြားလည်းအသည်းရောဂါ, နှလုံးရောဂါ, မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း, စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပင်သေခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ခံတွင်း Turinabol မိန်းမတို့အဘို့လုံခြုံဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ဖို့မသက်သေပြနေသည်။ ငါကထိုကဲ့သို့သောအကျိုးဆက်များ၏ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာအလွန်ကြှနျုပျတို့သညျဤမူးယစ်ဆေးယူမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအကြံပြုကြဘူးတကယ်တော့ substantial.So သောသက်သေတကယ်တော့င်ဤအကျိုးဆက်များလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ကြသည်ဟု, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲမဟုတ်ဘူး။
ဘယ်မှာခံတွင်း turinabol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါ?t ကိုတကယ်သင်ကပါးစပ် Turinabol အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဆုံးဖြတ် about.If, သငျသညျသှေးကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်ဝင်နေကြသည်စဉ်းစားရန်ကောင်းတစ်ဦး questin ပါပဲ။ သင့်အနေဖြင့်ဒေသခံဆေးဆိုင်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများမဝယ်နိုင်, နှင့်အွန်လိုင်းပါးစပ် Turinabol, မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းဗားရှင်းအမိန့်ထုတ်ခံရနိုင် entity ဆိုင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ရရှိနိုင်, အွန်လိုင်းဝယ်ယူရေးပါးစပ် Turinabol အမှုန့်ကိုပိုပြီးမြန်ဆန်အဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, ရွေးချယ်အားကောင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ရဝုဏ်သင်သည်ဖြစ်ပါသည် မရလျှင်သင်ပြီးသားတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှိပါကသင်သည်ဂုဏ်ပြုလွှာဒါတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရှိသည်,, AAS ဖြစ်ကောင်းသင်တို့၏ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
4155 Views စာ
levitra ပိုမိုထိရောက်စေရန်မည်သို့	အမျိုးသမီး Viagra? အဆိုပါလိင် Enhancer Flibanserin အမှုန့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကို